Ny rafitra fitehirizana Cloud maimaim-poana tsara indrindra | Vaovao momba ny gadget
Isan'andro ny rakitra video na sary dia mitahiry fitahirizana bebe kokoa amin'ny fitaovantsika, ity dia mety ho olana amin'ny olona maro izay tsy afaka manitatra ny tenany amin'ny fitehirizana ivelany. Ity olana ity dia mampatahotra kokoa amin'ny tranga finday, izay ampiasaintsika isan'andro ary tsy manangona rakitra multimedia fotsiny, fa io rafitra sy fampiharana io ihany no mameno tsikelikely ny fitadidiantsika.
Mba hisorohana ny zava-misy tsy maintsy mamafa ny fampahalalana heverintsika ho manan-danja, toy ny sary na horonan-tsary amin'ny fotoana manan-danja, dia azontsika atao ny mampiasa ny rahona amin'ny Internet. Mety hampidi-doza ny fananana ny mombamomba antsika rehetra amin'ny Internet fa ny mifanohitra amin'izay no izy. Azo antoka kokoa noho ny fananana azy ao amin'ny terminal, fa raha sanatria misy halatra na fatiantoka dia tsy azo atao ny mamerina azy. Amin'ity lahatsoratra ity dia hiresaka momba ireo rafitra tsara indrindra hitehirizana ny mombamomba antsika maimaimpoana isika nefa tsy atahorana ho very azy io.
Ity fomba fitehirizana ity dia tsy mamela anao hitahiry ny sarinao na ny horonan-tsarinao, fa mahasoa ihany koa raha mila mizara antontan-taratasy na faktiora ianao, satria rehefa mampakatra azy amin'ny rahona ianao dia hahazo miditra aminy avy amin'ny fitaovana rehetra. Ohatra: mampakatra rakitra na rakitra anananay amin'ny terminal finday hampiasantsika azy amin'ny solosaina na takelaka. Tokony hotadidintsika fa ny lafiny maimaim-poana dia tsy misy fetrany, noho izany amin'ity lahatsoratra ity dia hasiantsika antsipiriany ny fahaiza-manaon'ny tsirairay amin'ireo safidy.
2 Google Drive sy Google Photos
2.1 Tombon'ny Drive
2.2 Tombony ho an'ny sary
Amazon dia manana serivisy fitehirizana rahona manokana, miaraka amin'ny kinova maimaimpoana sy karama. Ny Fanompoana manokana avy amin'ny Amazon Cloud Drive maimaim-poana, izay ahafahanao manana rakitra hatramin'ny 5 GB. ny serivisy fandoavana hamela anao hanana toerana bebe kokoa mety hisy 20GB, 50GB, 100GB, 200GB, 500GB, ary hatramin'ny 1000GB fitehirizana rahona. HERE azonao atao ny misintona azy.
Ianao dia tokony manana kaonty Amazon ary mametraka ny iray amin'ireo mpanjifa ianao. Ao amin'ny rafitra fiasanao, a fampirimana antsoina hoe «Cloud Drive». Izay rehetra apetrakao ao anatin'io fampirimana io dia voatahiry ao ny rahona
Raha manana fitaovana hafa ianao, toy ny solosaina hafa, apetrakao amin'ity solosaina faharoa ity ny mpanjifa avy amin'ny Amazon Cloud Drive. Ny olona rehetra ho hita eo ny rakitrao, Ankoatr'izay hampifangaro ny fomba roa.
Ity serivisy ity koa azo alaina finday na tablette iOS na Android. Fanamorana ny famindrana fampahalalana na rakitra eo anelanelan'ny rafitra roa.
Google Drive sy Google Photos
Google dia manolotra inona no serivisy tiako indrindra hampiasako manokana. Google Drive dia manolotra hatramin'ny 15 GB maimaim-poana, iza no hanananao fidirana amin'ny tranonkala na rindrambaiko finday na smartphone na tablette. Raha ny sary Google dia manintona kokoa ny tolotra maimaim-poana raha azo atao, satria ho azontsika maimaim-poana izany fitehirizana sary tsy manam-petra ho an'ny fiainana.
tsy mampino fidirana sy fampifanarahana.
Miaraka amin'ny antoka omen'ny mpizara Google azy manokana.
Ny haben'ny fisie azonao ampidirina dia lehibe dia lehibe.
Izy io dia manana mifanentana tanteraka amin'ireo kinova maro karazana an'ny Excel, Powerpoint ary Word, ny fitaovana lehibe amin'ny fonosana MS Office.
Ampiharo ny mitahiry mandeha ho azy, noho izany ny olan'ny fahaverezan'ny rakitra ataonao ary very noho ny tsy fahombiazan'ny solosaina dia zavatra taloha.
Tsy mila fikojakojana ho anao. Google no hiandraikitra ny fitazonana ireo rafitra havaozina foana.
Tombony ho an'ny sary
Ampandehano ny fampifanarahana mandeha ho azy amin'ny Smartphone Manamora kokoa ny fiainana ho antsika izany, ny fanaovana kopian'ny backup ny sarinay na ny horonan-tsary dia atao isaky ny mifandray aminy izahay.
Maimaimpoana maimaimpoana tanteraka.
Andao handamina, zarao sy tantano ny sary sy ny horonan-tsary miaraka amin'ny sentika iray.
Izy io dia mifanaraka amin'ny karazana fitaovana rehetra. iOS o Android.
Mora ampiasaina izy io, miaraka amina interface interface intuitive.
Mampiditra ny haitao mahery an'ny fikarohana google. Azonao atao ny mitady ny sarinao amin'ny teny lakile rehetra. Rehefa mitady "alika", ohatra.
Manana fiasa izay scan sary taloha, esory ny famirapiratana sy ny fanodikodinana, mitahiry ny lokony sy ny endrik'izy ireo.
Klasika eo amin'ireo kilasika, miaraka amin'ny lazany betsaka, saingy, araka ny ho hitanao dia mety tsy ilay safidy mora vidy indrindra io. Manolotra anao izy ireo Fitahirizana 2 GB maimaimpoana amin'ny rahonao, izay azonao itarina hatramin'ny 18 miaraka amina asa tsotra kokoa na kely kokoa. Na eo aza ny maha-iray amin'ireo sehatra malaza indrindra sy tranainy indrindra, dia lasa lany andro tanteraka izy io satria amin'ny fotony dia manome anao fahaiza-manao tsy misy fotony izy, izay tsy misy dikany raha vao mitahiry rakitra ianao.
Na izany aza, raha afaka mahafeno fepetra takiana ianao hahatratra 18gb fitehirizana, tsotra ny mahatratra 16GB, mila manasa olona hifandray fotsiny ianao hamoronana kaonty. Amin'izany fomba izany, na eo aza ny fitehirizana azy voalohany, hanana serivisy azo ampiasaina tanteraka isika satria mifanaraka amin'ny roa izy ireo iOS y Android.
Ny fomba fandoavam-bola dia tsy manintona amin'ny fampiasana manokana, satria izy io dia iray amin'ireo serivisy lafo indrindra amin'ny sehatra, miaraka a fandoavana isam-bolana € 11,99 na fandoavana isan-taona € 119,99. Ho an'ny fampiasana raharaham-barotra dia miova ny zavatra, satria manana tombony izay tsy ananan'ny hafa.
Ny iray amin'ireo serivisy maharitra indrindra amin'ny sehatra dia ny SkyDrive taloha, serivisy izay naha-mpampiasa ahy hatramin'ny novain'izy ireo ny drafitra maimaimpoana. Tamin'ny 2 Novambra 2015, nanambara i Microsoft fa ny drafitra fitehirizana tsy voafetra ho an'ny fonosana Office 365 Home, Personal ary University dia nesorina ary izany tahiry izany Ny OneDrive maimaim-poana dia hahena amin'ny 15GB ka hatramin'ny 5GB fotsiny.
Io zava-misy io no antony niovan'ny mpampiasa maro tamin'ny fomba fandoavam-bola na nifindra tany amin'ireo sehatra hafa izay manome tahiry maimaimpoana bebe kokoa, na izany aza dia sehatra tsara izany ho an'ny vidiny € 2 isam-bolana dia hanome anao fidirana amin'ny fitehirizana 100GB.
Sokafy haingana ary tahirizo ny rakitra OneDrive amin'ny fampiharana Office toy ny Word, Excel, PowerPoint, ary OneNote.
Mitadiava sary mora foana noho ny fanamarihana mandeha ho azy.
Mahazoa fampandrenesana rehefa amboarina ny antontan-taratasy zaraina.
Mizarà rakipeo sary sy horonan-tsary tianao indrindra.
Asongadino, sonia ary soraty ireo rakitra PDF amin'ny OneDrive anao.
Mahazoa fidirana amin'ireo rakitrao manandanja indrindra Tsy misy fifandraisana.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao momba ny gadget » General » Ny rafitra fitehirizana rahona maimaimpoana tsara indrindra
Ny fampiasana eReaders dia nitombo 140% tato anatin'ny herinandro vitsivitsy